Indlu Yegalari @ I-Edene Elahlekile
Igalari House yindlu yabalingiswa esanda kulungiswa ngo-1940. Ukulungiswa kwakamuva kunikeza ingaphakathi lesimanjemanje nelihlanzekile kuyilapho kugcinwa izici zenkathi ekhangayo zesakhiwo, amafasitela e-art deco leadlight nama roses osilingi. Iqokwe ngesitayela ngemidwebo ye-orignal ezindongeni, izinga elengeziwe lokunethezeka lizokwenza ufune ukuhlala. Indlu yakhelwe ngemuva kwe-Lost Eden Art Gallery kanye nengadi enempelasonto yayo ye-Garden Eats yokudla ehlinzeka ngokudla okunempilo nomoya opholile.
I-Gallery House Dwellingup iyindlu yokugezela eyi-3 imibhede emi-2. Kunomlilo wezigodo owakhelwe ngaphakathi ukuze ukhululeke kuze kube sebusika. Ikhishi elisha nezinto zikagesi. Igumbi elikhulu lelanga elibanzi elibheke egcekeni elingemuva lapho kukhona indawo yokuphumula yamapulangwe e-BBQ ehlobo kanye nendawo yokubasa umlilo wasebusika. Igalari House iyafinyeleleka kubasebenzisi bezihlalo zabakhubazekile. Sicela ubuze mayelana nezidingo zakho zokufinyeleleka.
Igalari eseduze nengadi, neveni yayo enhle yokudla yamapulangwe; I-Garden Eats @ I-Edene Elahlekile inikeza izinketho zokudla ezinempilo ezisekelwe esitshalweni endaweni engadini enempilo kodwa ekhululekile.
Ungahlola izithombe eziningi zegalari kanye ne-Garden Eats ku-FB noma ku-Insta
4.99(73 okushiwo abanye)
4.99 · 73 okushiwo abanye
I-Dwellingup iyidolobhana elihle elisehlathini le-jarrah eningizimu-ntshonalanga ye-Australia. Iyindawo edumile yokuya kuyo imisebenzi eminingi yangaphandle, ezungezwe izindlela zokuhamba izintaba nokuhamba ngebhayisikili, futhi i-9km kuphela ukusuka e-Lane Poole Reserve, indawo evikelekile yasehlane ehlanganisa uMfula i-Murray, elungele ukubhukuda, amapikiniki nohambo oluthambile lwesikebhe noma uhambo olujabulisayo. i-kayak adventure iqhubekela phansi lapho izimvula zasebusika ziletha amanzi amhlophe.
Edolobheni uzothola izitolo nezindawo zokudlela, i-Dwellingup Hotel enomlando kanye nojantshi wesitimela wabavakashi eHotham Valley. I-Dwellingup iyi-mecca yamabhayisikili asezintabeni nokwakhiwa kwemizila emisha yamabhayisikili entaba kanye nenqamula izwe okuyibeka kahle endleleni yayo yokuba idolobha lemizila elibalulekile emhlabeni jikelele.
Uma ufuna nje ukuphumula futhi ujabulele ukuba seduze nemvelo i-Dwellingup inakho konke futhi uzoba ne-Gallery House njengesisekelo sakho sokwenza okuncane noma okuningi ngokuthanda kwakho.
Sihlala ngezansi komgwaqo, futhi siyatholakala ukuthi uthintwe noma nini.